Ogaden News Agency (ONA) – Dr. Nagaso Gidada oo Dhaleeceeyay Kooxda EPRDF.
Dr. Nagaso Gidada oo Dhaleeceeyay Kooxda EPRDF.
Posted by Dulmane	/ December 31, 2017
Madaxwaynihii hore ee Itoobiya Dr. Nagaso Gidada oo magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya saxaafada kula hadlay ayaa dhaliil culus dhabarka usaaray kooxda fashilantay ee EPRDF, kuwaas oo mudo 27 sano ah talada wadanka soo hayay.
Dr. Nagaso Gidada ayaa sheegayin wadanka Itoobiya uu kusugan yahay marxadal adag oo u baahan in wax laga qabto wuxuuna Mr. Gidada kadigay in hadii isha laga fiirsado ay xaaladu sii adkaan doonto isla markaana lagaadhi doono xili aan waxba laga qaban karin.
Dr. Nagaso Gidada ayaa kooxda talada wadanka kufashilantay ee EPRDF kulataliyay in ay xilka wadanka iska wareejiyaan isla markaana ay doorasho xor iyo xalaal ah wadanka kaqabtaan si loohelo buuyidhi hogaan nadiif ah oo dalka iyo dadka gaadhsiiya hormar iyo cadaalad lagu badhaadho.
Sidoo kale madaxwaynihii hore ee Itoobiya Dr. Nagaso Gidada ayaa kooxda EPRDF/TPLF ku eedeeyay in aysan ka jawaabin su’aalaha faraha badan ee kaga imaanaya shacabka ay gumaystaan ee Itoobiya, wuxuuna Mr. Gidada sheegay in mas’uuliyiinta wayaanuhu ay si ula kac ah sharciga ubaal maraan.
Dr. Nagaso Gidada ayaa ah shakhsiga kusixiixan xeerka wadanka uyaala ee la ansixiyay sanadii 1995 tii, wuxuuna Dr. Gidada sheegay in tastuurka wadanku uu yahay magac uyaal oo aan lagu dhaqin wadanka.
Ugu dambayntii Dr. Nagaso Gidada oo ah gudoomiyaha xisbi mucaarad ah ayaa sheegay in hadii kooxda fashilantay ee RPRDF ay yeeli waydo talooyinkooda ay iyagu qaadayaan dhibaatooyinkii dhacay iyo kuwa hada dhici doonaba.